A Complete Guide ku Togaf Certification
Chii chiri TOGAF?
TOGAF inogara yeThe Open Group Architecture Framework. Icho chimiro chekuvaka-hutano hunotipa nzira yekugadzirisa nekugadzirisa, kuronga, kushandisa uye kutonga bhizinesi rekambani yekugadzirwa kwekombiyuta.
Ndiani anopa Certification?
Izvi zvinoenderana neUnited States Department of Defense ye Technical Architecture Framework for Information Management (TAFIM) uye yakabudiswa neThe Open Group. The Open Group mutengesi uye teknolojia yekusagadzikana kushandiswa kwemabhizimisi emakambani nemasangano anopfuura mazana mashanu uye iyo ndiyo nhengo yekutanga yekudzima kuongorora.
Ndeipi pfungwa ye TOGAF?
Nheyo yehutungamiri ye TOGAF yakatsigira vashandi ndeyekuvandudza kushandiswa kwebhizinesi rebhizimisi nekugamuchira nzira isiri iyo nzira yekugadzirisa chirongwa. Chaizvoizvo, iyo ndiyo nzira yakakonzerwa nomupikisheni anotarisa kuva mudzidzi Enterprise Architect. A TOGAF certification iyo inonyatsogadzika kuisa chikwata muchitampu
● kuvimbisa kuti vashandi vanokosha mazano ekugadzira zvakagadzirirwa
● kukwanisa kuongorora kwakasikwa uye kunogona kuwirirana zvakananga kune mabhizimisi 'maitiro ekugadzira.
Pano pane sangano rinogona TOGAF inoshandiswa?
Sezvo TOGAF inosanganisira nzira isiri iyo nzira yekugadzirisa chirongwa, inogara ichiratidzwa pazvikamu zve4 zvezvinhu zvinoshandiswa nebhizimisi, kuti iite Bhizimisi, Kushanda, Data uye Technology.
Business Architecture - Ichi ndicho chinhu chinoratidzira maitiro ebhizinesi, hutungamiri, sangano uye huru yebhizimisi nzira dzechikwata
Application Architecture - Izvo zvinopa mufananidzo wega wega humwe hurumende dzakatumirwa kutumirwa, hutano pakati pehurongwa hwekushanda uye ukama hwavo hukama maitiro ebhizimisi
Data Architecture - Icho chinoratidzira chimiro chechikwata chekodzero uye chepfumi chezvinhu zvekushandisa uye nehupfumi hwavo.
Technical Architecture - Iyo midziyo, mapurogiramu uye hutano hunodiwa huripo hwekushandiswa kwemashoko
Ndiani anofanirwa kuratidzira TOGAF Certification
Hapana hutsika yekufanirwa yekuwana TOGAF 9.1 certification. Chero mamiriro ezvinhu, munhu anenge achikumbira anofanira kubvisa miedzo yesangano rakabvumirwa kuti atomire pachena muIn Enterprise Architect.
Ndeapi nhamba yeZvinga dzeZvino dzinofanira kubviswa?
Munyori wenyika ane godo we TOGAF 9.1 inofanirwa kuchenesa miedzo miviri, Nhamba 1 ye TOGAF Foundation yedzidzo uye Nhamba 2 ye TOGAF 9.1 certification. Tarisiro yekugadzirira kuisa pfungwa pavari yaizokurudzirwa zvikuru kujekesa imwe Nhamba panguva imwe chete. Chero zvazviri, kugadzirira nheyo dzakarondedzera mafundo avo akadai kuti mukwikwidzi anogona kufungisisa, uye kujekesa maZite aya maviri mune imwe chete. Iyo nguva yekugadzirisa uye nekugadzirisa ndeye mutemo wezuva re4 uye yekuzviongorora ndevhiki dze2
Ndezvipi zviratidzo zvinotarisirwa kubvisa Testheni?
Kuparadzanisa kwakarurama kwezvinyorwa ndezve -
1. Level One kana Foundation level - Nhamba yekupfuura inoda 55% iyo 22 inobva kune yakanyanya kunyanya ye40 inotarisa. Izvi ndezvipi zvese zvakasiyana-siyana zvekuita mibvunzo nemubvunzo wega wega unofambisa tsananguro yoga.
2. Nhamba mbiri kana chiziviso chepamusoro - Nhamba yekupfuura inoda 60% iyo 24 inobva kune yakanyanya kunyanya ye40 inotarisa. Izvi ndezvipi zvese zvakasiyana-siyana zvekuita mibvunzo nemubvunzo umwe neumwe unotumira tampu yega.
3. Nhamba yeChimwe Chekutanga neZviri Yakabatana TOGAF 9.1 - Iko kuongorora kunoumbwa nezvikamu zviviri. Chikamu chimwe chakangofanana neNyuniti Rimwe pepa rinotaurwa pamusoro apa uye chikamu chechipiri chakangofanana neChikamu Chepiri mapepa akataurwa pamusoro apa, zvisinei kana pachiitiko chokuti mabheji anoongorora chero chikamu chimwe chete iye anofanira kutora nzvimbo iyoyo yechipimo zvakare. Kungofambidzana Kudzidziswa Kwekudzidziswa Nzira inogona kugonesa kugadzirisa kubvisa Mazinga maviri mune imwe chete.
Iyo Nhamba mbiri dzinofanira kunge dzakasunungurwa kuitira kuti zvigone kupiwa Togaf 9.1 certificateaiton.
Hole pakati pekuedza maviri - Panofanira kuva nehomwe yemwedzi umwe pakati pekuedza kwe fizzled. Somuenzaniso, kana munhu anokumbira achiuya ari pfupi kuongorora 25th June, 2017, nguva yakasimudza kusvika 27th June, 2017 inofanira kukonzerwa. Chero kuongorora kunoitwa kare izvo zvisingazofungidzirwi.
Iko kuongororwa kunoitika kupi?
Misarudzo inoitika kana paPearson VUE inotarisa munyika yacho uye yakazarura bhuku rekuongorora, umo muongorori anobvumirwa kusarudza "kureva" tab mukati mekuongorora paPc screen yekushandisa kuburikidza nebhuku uye tose kune zvinyorwa. Chipiri chechipiri ndechokupa kuongorora kwekutsvaga. Kunyanya kuratidza kuisa pfungwa kuchakurudzira kuongororwa kwepaIndaneti, uye zvechokwadi kuchakugadzirira iwe kuguma kwekuedzwa kwegore nekunyadzisa kwakasiyana-siyana sechimiro chemaitiro avo.
Ndezvipi zvakakosha kugadzirisa zvinangwa zve a TOGAF Certification course
Sezvo TOGAF Certification Course yaenda kunatsiridza maitiro ezvakanaka zvekuvaka mapurisa, sangano racho rinonyanya kureva:
Architecture Development Method mumutambo wakasiyana
Enterprise Continuum uye Zvishandiso
Architecture Partitioning, Hurumende, mazano nezvakadaro.
Pakati pemakwikwi, mukwikwidzi acha:
Iva nerunyararo neChitangaridzo Phase uye mukuwedzera kuGadzirira Kuronga Maitiro
Kunzwisisa Architecture Content Framework, Metamodel pamwe chete Governance.
Kushandiswa kwekugadzira mazano ekugadzirisa nekujekesa mamiriro emabhizimisi,
Kunzwisisa ADM, kukosha kwayo kutarisira uye kuchinja kwakasiyana kweAAD
Nyatsoongorora Maturity Models uye Skills Framework yeBusiness Architecture
Ndechipi mari yakatarwa yekugadzirira TOGAF 9.1 certification?
Mumwe mu-kirasi anofunga nezvezvikamu zviviri - Sangano neChipupuriro pamwe chete zvinodhura zvakapoteredza INR 75,000. Kunze kwebhadharo, zvakakosha kutarisa nheyo yekugadzirira uye hurongwa hwayo usati wapedzisa.
Ndeipi tarisiro yeramangwana mushure memugumo we TOGAF 9.1 certification course
Sezvo uyo anenge akakumbira achange achivaka kunzwisisa kwakanyanya kwemahofisi ekugadzira mapurisa, tarisiro yeramangwana inosanganisira:
Kuchinjwa sebhizinesi rebhizimisi reMNCs, uye marongerwo enyika. Nhasi, hapana sangano, rakazaruka kana roga roga rinogona kushanda pasina simba rekugadzira mabhizimisi rakagadzirwa
Shanda seyanyanzvi kuveza mukana wakakwana wekusiyanisa, kuronga nekugadzirisa zvirongwa zvekugadzira mukati memhizha
TOGAF 9.1 certification iyo inofanirwa pasi rose yehutano hwekutaura zvakajeka pane zvikamu uye zvinotarisirwa pamusoro pekusiyanisa, kuongorora nekushandura hurongwa hwakarurama hwebasa. Nhasi, kushamwaridzana kose, kuenda kune hutungamiri nekufambira mberi, kunoda bhizimisi vatengesi nekwanisi yekuzvinzwisisa, kuputsa uye shure kwekuita mhinduro dzakarurama dzekubudirira kwezviitiko.
Nei TOGAF Framework inoshandiswa kubatanidza IT & Bhizimisi
10 Zvikonzero zvekuwana TOGAF Training & Certification